Mety ho anao daholo aho amin'ny vidiny ambany sy ambany amin'ny ... | Martech Zone
Alahady 29 aprily 2007 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Ny atiny tao amin'ny tranokalako dia tsy dia natanjaka indrindra tamin'ny herinandro lasa teo - azafady raha diso fanantenana ianareo. Sahirana be aho namolavola fampiharana vitsivitsy tao an-trano. Izay tsy noforoniko amin'ny atiny, antenaiko fa hamboarina amin'ny plugins sasany. Eo am-piasana dia miomana amin'ny famoahana rindrambaiko lehibe izahay ary manana tetik'asa fampisehoana iray izay hanomezana fitaovana hanehoan-tena amin'ny sasany amin'ireo endri-javatra manan-danja indrindra. Betsaka ny mandanjalanja ny fahombiazako ary manana loharanom-pahalalana vitanana aho hahavitana izany ka fanamby izany.
Mandroso tsara daholo ny tetik'asa rehetra ary hihaona amin'ny fe-potoana farany aho, herinandro vitsivitsy fotsiny no iasan'ny herinandro. Ary koa, mandinika indray ny asako manontolo andro aho ary mandinika tsara ny hoaviko any ary mandanja izany amin'ny fotoana mety any ivelany. Halanao ny handao mpampiasa be, fa indraindray ny asa tsy maintsy hidina amin'ny toekarena tsotra. Tsy tiako ny mitandrina amin'ny vola raha resaka asa no resahina, fa niara-niasa tamin'ny fanantenana hahatratra ny fidiram-bolako aho, roa taona lasa izay, rehefa nanontany. Nanjary nazava fa tsy hitranga izany raha mijanona eo amin'ny toerako aho. Miaraka amin'ny zanako lahy manomboka amin'ny oniversite amin'ity fararano ity dia mila manamboatra fanovana vitsivitsy aho ary manao azy ireo haingana.
Tiako ny fanovana ary manantena fatratra aho amin'ny zavatra ananako. Saika lasa aho ho fanombohana volana vitsivitsy lasa izay, saingy tsy mety ny fotoana. Tena tsara izany, nefa, izao. Vitsy ny olona afaka mametraka ny tohiny fa nanampy orinasa lehibe izy ireo nanomboka ny Nosy Vancouver ka hatrany Islandy ka hatrany Aostralia mba hampihatra tanjona kendrena amin'ny marketing, fampidirana ary automatique an-tserasera. Ny mpanjifako dia anisan'ny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny The Indianapolis Colts, The Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, AG Edwards, ary orinasa maro hafa momba ny fampandrosoana sy ny masoivoho eo anelanelany. Talohan'izay dia nanangana programa mailaka mivantana an-tapitrisany dolara ho an'ny gazety lehibe iray aho. Ny fahombiazana dia manangana fahatokisan-tena, noho izany dia matoky aho fa afaka mamadika orinasa manoloana ny Marketing sy ny Teknolojia.
Amin'ny maha consultant integration sy manager an'ny vokatra ahy dia andraikitro ny miresaka amin'ny orinasa, mamantatra ny fotoana mety ary manatanteraka ny vahaolana sahaza azy ireo. Ny andraikitro amin'izao fotoana izao dia mifantoka amin'ny fanarahan-dalàna CAN-SPAM, famolavolana Interface User, Accessibility, Usability, API ary ny fivoaran'ny endri-javatra. Izaho koa dia mahay tsara momba ny Rafitra Fampahalalana Geographic, Analytics ary ny Optimization amin'ny Search Engine. Heck, azoko natao pirinty mihitsy aza ny anarako tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny fandefasana vitsivitsy nataoko Bokin'i Chris Baggott, Marketing amin'ny mailaka nomen'ny isa.
Manantena ny hanohy an'ity karazana asa ity aho - na amin'ny alàlan'ny orinasako mpanolo-tsaina manokana na amin'ny alàlan'ny toeran'ny Tale / Executive amin'ny orinasa hafa. Liana koa aho maharitra fifandraisana amin'ny fifanarahana. Tanteraka ny nofinofy iray dia ny fanombohana hanontany amin'ny orinasako manokana. Tsy afaka miala any Indianapolis aho - tiako ato ny zanako ary mipetraka akaikin'ny Renin'izy ireo izy ireo. Ka raha misy fotoana ahafahana miasa any lavitra, dia izany rehetra izany koa no hataoko. Manantena ny hilentika voalohany amin'ny fanamby vaovao aho, angamba ny Search Engine Optimization. Nahazo valiny mahafinaritra aho tamin'ity tranonkala ity ary fantatro fa afaka manao an'io amin'ny hafa aho.
Oh… ary tsy hiala amin'ny bilaogy mihitsy aho! 😉
Tags: douglas karrmijerympitantana ny vokatra
Fitorahana bilaogy fitoriana ny filazantsara avy amin'i Guy Kawasaki
Apr 30, 2007 amin'ny 7: 12 AM
Mahafinaritra ny manana tolotra manintona vitsivitsy. Volana vitsivitsy lasa izay dia nomena ahy 100K hiasa herintaona any Qatar, firenena kely ivelan'i Irak, amin'ny maha-mpandrindra ny tamba-jotra ahy.
Izany dia mety hanolotra tolona mampihetsi-po ahy 8 taona lasa izay, fa ankehitriny miaraka amin'ny vady aman-janaka lahy 9 volana, tsy azonao atao ny misintona ahy hiala eto raha manandrana ianao!
Apr 30, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Niala tamin'ny asa manontolo andro aho 3 volana lasa izay hananganana orinasa vaovao, ary mbola tsy nahatsapa ho nahazo hery satria afaka miasa amin'izay tiako (ao anatin'ny fetra sasany!) Izaho dia mamorona mihoatra ny taloha.
Manana ny tombotsoan'ny mpiara-miasa amiko aho izay mitondra vola ampy hitazomana ny orinasa sy izahay hitazona izay manampy!
Oh, ary raha tsy izany dia hamaky an'ity Doug ity ny mpampiasa anao ankehitriny ary manontany tena hoe inona no mitranga? 🙂
May 1, 2007 amin'ny 11: 20 AM
Koa satria namako manokana ianao, dia somary hanakiana aho eto ary apetrakao amin'ny sokajy "mandefa lamba maloto" imasom-bahoaka. Betsaka amintsika no mitsikera matetika ireo atleta matihanina amin'ny fanaovana an'io karazana fanambarana io (ohatra: Terrell Owens, Randy Moss). Na dia marina aza fa manohy miasa amin'ny hafa izy ireo ary mitehaka amin'ny asa mahafinaritra amin'ny asany, dia miharatsy endrika ny toetran'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana.
May 1, 2007 ao amin'ny 12: 49 PM
Wow, tsy izany velively no tanjon'ny paositra, Randy. Raha ny marina, tsy manana afa-tsy zavatra tsara holazaina momba ny mpampiasa ahy ankehitriny aho. Tsy misy 'fanasan-damba maloto' ao amin'ilay paositra mihitsy. Mbola manolo-tena tanteraka amin'izy ireo aho ary mieritreritra fa izy ireo no tsara indrindra niasa tamiko.
Ity dia tsy lahatsoratra izay noterena tamin'ny fomba rehetra handotoana ny mpampiasa ahy ankehitriny na ny fanasan-damba maloto - fa ity dia lahatsoratra 'hitsapana ny rano' ary hijerena izay mety ho fotoana mety tsy fantatro. Tonga eo amin'ny sampanan-dalana aho amin'ny fiainako izay tsy mifanaraka amin'ny tanjako amin'izao fotoana izao ny tanjoko. Izany dia tsotra araka izay azoko atao.
Aleoko misokatra sy milaza ny marina momba ny faniriako toy izay mihidy vava. Misy ireo mieritreritra fa tsy tokony hiteny na inona na inona ianao ary mivoaka eo am-baravarana fotsiny. Tsy dia miraharaha loatra an'ity orinasa ity aho raha hanao an'izany. Tokony hahafantatra ny zavatra ilaiko izy ireo ary tokony hahafantatra izay ilain'izy ireo aho. Raha misy lalao dia miditra aho! Raha tsy izany dia mila miroso amin'ny fiainako aho.
Indray mandeha… tsy misy 'fanasan-damba maloto' holazaina.
May 1, 2007 ao amin'ny 11: 24 PM
Ny fitsapana ny rano dia tsara. Ny fananan'ny mpampiasa amin'izao fotoana izao hahalala izany ao amin'ny lahatsoratra bilaogy… tsy dia tsara loatra… fa, heveriko fa efa niresaka tamina amin'izy ireo ianao ary ankoatr'izay dia tsy raharahako izany.
Raha mila fanampiana tapa-potoana ianao dia ampahafantaro ahy.
May 2, 2007 amin'ny 6: 41 AM
Tsy mino aho fa nisy ny tsy nampoizina tamin'izy ireo - saingy misy ny ahiahy. Olona malalaka sy marina foana aho ary efa elaela izay. Ity lahatsoratra ity dia tsy vita aorian'ny fifanakalozan-kevitra sy fanapahan-kevitra am-bolana maro.
Mazava ho azy, ny famahanam-bilaogy dia mitondra refy vaovao tanteraka amin'ny toe-javatra toy izao. Tsy zavatra azonao jerena ao amin'ny boky torolàlana momba ny fitantanana, azo antoka izany! Izahay kosa dia mamaky azy io.